अश्लील छोड्दै: अश्लील समस्या पहिचान गर्नुहोस् | इनाम पुरस्कार
छोड्दै पोर्न अश्लीलको साथ कसरी समस्या चिन्न सकिन्छ?
के तपाईं वा तपाईंको नजिकै को नजिकै अश्लील संग एक समस्या छ? यो सेक्सनले समस्या उत्पन्न गरेको छ भने यो खण्ड न्यायाधीश गर्न चार तरिकाहरू प्रदान गर्दछ।
पहिलो, आगमनको संक्षिप्त पोर्नोग्राफी Screener एक 80% विश्वसनीयता संग केवल पांच प्रश्नहरु को लागी सरल निदान को सरल छ। तपाईंले परीक्षण परीक्षण आफै प्रयोग गर्नका लागि निर्देशन पाउनुहुनेछ।
दोस्रो, त्यहाँ एक सरल भिडियो हो प्रतियोगिता तपाईं लिन सक्नुहुन्छ, Gabe Deem को रिबूट राष्ट्र मा शिष्टाचार।
तेस्रो, तल देखाइएको पोर्न उपभोग स्केल छ। यो इन्टरनेट पोर्नोग्राफी खपतको आवृत्ति र तीव्रतामा आधारित छ। स्व-मूल्याङ्कनको लागि स्केल प्रयोग गर्नुहोस् वा कसैको साथ काम गर्न को लागी कि उनीहरूलाई हानिकारक गरिरहेको छ भने हेर्न।
चौथो, पुरुषहरूलाई उनीहरूको हुन सक्ने कुनै पनि यौन प्रदर्शनको समस्याको मुख्य घटक हो कि पहिचान गर्न वा छैन भनेर पहिचान गर्न एक साधारण शारीरिक परीक्षण लिन सक्छ। यहाँ छ पुरुषहरूको लागि यौन प्रदर्शन परीक्षण.
अश्लील उपभोग स्केल
निम्न तालिकाले केही आत्म-मूल्याङ्कन निर्देशनहरू सेट गर्दछ। यसले पोर्न उपभोगको स्तर र प्रभाव र यो तपाईं र तपाईंको वरपरका व्यक्तिहरूमा हुनसक्छ। यो हरेक परिस्थितिको आवरण गर्न होइन, तर तपाईको जीवनमा पोर्नको बारेमा सोच्न मद्दत गर्नु पर्छ र यो समस्याको लागी हो भने।
मूल्याङ्कन गर्न तपाईं कति पोष्ट भइरहेछौं एक ईमानदार कुराकानीको माग, भले यो केवल आफैले मात्र हो। हस्पिङ के हो भन्नेमा साँचो उत्तर कहाँ छ? स्तम्भ।
बिर्सने पोष्टको साथ प्रयोग गर्ने कुनै वास्तविक मुनाफा छैन भनेर सम्झनुहोस्। यदि यो बाहिर जान्छ भने तपाईं यसको द्वारा सांसद हुनुभएको छ, तपाईले आफ्नो जीवनमा वास्तविक समस्या पैदा गर्दै हुनुहुन्छ र तपाइँ आफ्नो प्रयोग नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्न, तपाईंलाई रोक्न मद्दत चाहिन्छ। रिकभरी अवधि चट्टान हुन सक्छ तर तपाईले यौन स्वास्थ्य प्राप्त गर्न मद्दतको लागि धेरै सहयोग उपलब्ध छ।
अन्ततः, वास्तवमा सबै पूर्व प्रयोगकर्ताहरू पत्ता लगाउँछन् जीवनले जीवनको एक अंश बन्नु पछि धेरै सुधार गर्छ। आज सुरू गर्नुहोस्!
इनाम पुरस्कार फाउण्डेसन प्रस्ताव छैन।
मद्दत प्राप्त गर्दै >>